Dooro/digaagad qoorqabad biyo kuma cabto! – Kaasho Maanka
Rumayntu ama aaminaaddu ma ahan wax la doorto ee waa qanaaco aad ku qanacdo arin, waana wax ka yimaada maskaxda iyo dareenka hoose ee qofeed, kuna dhisan sababayn iyo ku sugnaansho.
Haddaba haddii ay lunto aaminaadda uu qof aaminsanyahay dhab ahaanshada diinta Islaamka oo ay u cuntami waydo, diintu waxa ay qabtaa in qofkaasi ay tahay in loo bandhigo in uu ku laabto diinta, oo uu ka laabto gaalnimada, haddiise uu ka laaban waayo, ay tahay markaasi in la qaarajiyo oo qoorta laga gooyo. Amarka qaarajinta ama qoor-goynta qofka ka laabta diinta Islaamka, walow uusan ku qornayn Qur’aanka oo uu ku qoranyahay uun axaadiista, waxaa la sheegaa in uu yahay amar ka yimid xagga Allaah, kuna dhisan xikmad, xeelad, iyo ogaal badnida Allaah.
Marka qofkii loo bandhigo laba khayaar ee uu haysto, asaga oo ay wali ka daadagi la’ dahay diintii, ayuu qofku afka ka sheegan karaa in uu ku laabtay islaamka, si uu naftiisa u badbaadsado, halkaasna waxaa ka dhalanaysa munaafaqnimo oo ayaduna ah nooc kale oo gaalnimadaba ka daran. Ujeedku waxa uu ahaa in gaalnimo la daweeyo, balse waxaa la abuuray munaafaq cusub?
Labada ikhtiyaar ee uu Allaah insaanka iskugu dhiibay; ‘diinta ku laabo ama dil kasbo’ ma ahan labaduba kuwo ka badbaadinaya qofka naar, balse waa kuwo dhinacna ka caburinaya xoriyadda fakarka, dhanka kalena ka abuuraya bulsho dusha islaam ka ah, balse qalbiga gaalo ka ah.
Markii xor la yahay ayuu qofku soo bandhigi karaa waxa ka dhex guuxaya dareenkiisa hoose ee qofeed, markaas ayaana la dawayn karaa arimo badan ayada oo aanan qofna lagu riixin in uu laba-wajiileeyo. Soomaali horaa tiri:- “Dooro/digaagad qoorqabad biyo kuma cabto”.
QORMO LA XIRIIRTA: Abuurkii Aadam iyo Diinta
W/Q: Gallad Gurxan 14th July 2019